Newe mawebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga kuti hapana mikana yakawanda yokuti Cyberkriminelle inogona kutora yako. Zvisinei, tisati tasvika pane izvozvo, ngatidzokerei kwekanguva tigofunga kuti webhusaiti yako inorevei kwauri.
Sezvo iwe uri munhu, unogona kungova wega webhusaiti yega oder kunyange bhizinesi rebhizimisi rekuInternet kuti iwe unofunga hauna hanya. Iko kune kukosha mune zvose uye kunyange nzvimbo ine zvinyorwa inobata mamwe marudzi e data. Zvichida zita rekutumidzwa nephasiwedi yaunoshandisa Scheibe dzose dzekombiyuta yako yepaIndaneti? Kana iwe uine bhizinesi duku, webhusaiti yako inomirira mararamiro ako uye mukurumbira, pamwe chete nematoni ehumwe ruzivo rwekukosha huri wega chete, asiwo vatengi vako.
Kana iwe wawana zvinyorwa kubva Forbes, The Economist kana nhamba ipi zvayo yekambani yekuchengetedzwa kweInternet kunze uko nhasi, zvinonyanya kunge iwe unoziva izwi rokuti ‘Data ndiyo itsva Mafuta’. Yakava imwe yezvinhu zvisingakoshi zvakanyanya zviripo paIndaneti nhasi (uye saka tinoona kuwedzera kweVPN) uye sechinhu chero chipi zvacho, chinogona kubiwa uye kutengeswa kana kuchinjana.
Cyberkriminelle haazofungi kana webhusaiti yako iri duku, vanoshandisa zvishandiso zvinoshandisa kusununguka kuongorora nzvimbo yese yavanosangana nayo, kungounganidza mashoko. Kana vasingakwanisi kushandisa ruzivo, vanogona kutengesa kune mumwe munhu anogona.
Sezvo vazhinji vedu isu tisingaiti pachedu uye tichichengetedza midziyo yatinoshandisa mawebsite edu, tichave tichitarisa zvinhu zvisiri zvenyama zvekuchengeteka kwewebhu. Izvi zvinosanganisira nzvimbo mbiri huru; 1) kuchengetedza webusaiti pachayo uye 2) kuchengetedza Daten iyo vatengi vako vanokupai.
2.1 Chinyorwa 7 DDoS Kudzivirira SSL Cert. Unterstützung Kostenlose Testphase 30 Mazuva 30 Mazuva 30 Mazuva Shanyira paIndaneti: Incapsula.com 3. Cloudflare
Iva nechokwadi chekuti nzvimbo yako yepaiti uye chero zvinyorwa zvese zvauri kuita zviri kusvika. Zvose mapurogiramu anozivikanwa kuvanhu anotasunungurwa nemabhugi uye zvinogona kuitika kuchengeteka. Kunyange izvo izvo zvichengetedzwa zvinongororwa zvichave nezvisungo izvi. Zvose zvinotora ndezvekushaya njodzi uye ma-cyberkriminelle achakwanisa kuwana. Nokuva nechokwadi chokuti iwe unogadzira zvigadziriswa nguva dzose, mikana yekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekushandisa kushandiswa inoderedzwa.
Izvi zvinonyanya kukosha kune avo vari kushandisa zvishandiso zvepawebhorosi izvo zviri pachena. Nenzira yavo chaiwo, mashandisi akazaruka anosiya ivo vanotambura kune avo vari kutsvaga kushandiswa. Kuti urwise izvi, Bereich zvigadzirwa zvakawanda zvaungashandisa kukubatsira kuti uone.
Kuti utange iwe kubva, edza LastPass, Dashlane oder KeePass. Vamwe vakasununguka, vamwe havasi.
Kune vaya vari kutengesa mabhizimusi epaIndaneti kana kuita chero chero rudzi rwekutengeserana kwevatengi venyu paIndaneti, SSL haisi yekusarudza. SSL zvitifiketi zvinogona kuwanikwa kubva kune dzimwe nzvimbo asi yako yakanakisa kutengesa ndeyokuwana mumwe kubva kune munhu anopa mbiri akadai saiye SSL.com.
Zvimwe, vazhinji vanoita Webhosting vakadai se A2Hosting uye SiteGround uyewo shandisa sewechitatu-zvekare mutengesi zvakare uye anogona kuzvitengesa kwauri.
Kana iwe uchingotanga kubuda, rega iwe Webhosting waunopa iwe uzive kuti iwe unoda kutanga eCommerce-Website uye zvichida kuti ivo vachava nekutengesa purogiramu iyo inosanganisira zvose zvese zvaunoda. Dzvanya apa uone WHSR yakazara yakazara runyorwa rwevangangoita webhusaiti hoster.
Zvichiitika, kunyange kana iwe usiri kuzoshanda E-Commerce-Website, makambani ewebhu nhasi anotarisira kunze kwekuchengeteka zvakare.
SSL Cert. Unterstützung
Kostenlose Testphase 30 Mazuva 30 Mazuva 30 Mazuva
Cloudflare inonyanya kuzivikanwa nemazita seC Content Distribution Network (CDN), iyo inonyanya kukosha iyo yakavaka zita rakasimba mukuchengetedza vatengi masayiti pakurwiswa kweSparified Denial of Service (DDoS). Zvakare, kufanana neIncapsula, Cloudflare mutengo wekutengeserana kwepamusoro Scheibe zvakanyanya kuvharika.
Newewebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga kuti
Newe websted ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga
Uue mawebsite ane mabhiriyoni ari paInternet nhasi, sewe muridzi weimwe nzvimbo, unogona kunge uchifunga
Nou lloc web de creació de llocs web interiors d’Internet nhasi, sewe muridzi weimwe
Textoptimizer: Optimallaşdırma və Khale & Fumana Likhopolo Tse Ncha